IPhone 7 Plus, midabka madow, iyo 128 GB, kuwa ugu cadcad presale | Waxaan ka socdaa mac
IPhone 7 Plus, midabka madow, iyo 128 GB, kuwa ugu cadcad presale
Kaliya dhowr saacadood ka hor, ilaa siddeed subaxnimo, in iPhone-ka cusub ee iPhone 7, iPhone 7 Plus iyo sidoo kale Apple Watch Series 2 iyo Apple Watch Series 1 waxaa lagu iibinayaa dukaamada Apple ee Isbaanishka. Safafku uma aysan noqon sidii munaasabadaha kale. Waxaa laga yaabaa maxaa yeelay waxaan horey u ogaanay in moodooyinka qaar aan laga heli doonin keydka. Ama waxaa laga yaabaa sababtoo ah warku kuma filna dad badan. Sikastaba xaalku ha ahaadee, waan dhameeyay wajigii hore ee iibka, waxaan horeyba uheysanay daraasadii ugu horeesay oo muujineysa waxa ay yihiin dhadhanka ay doorbidayaan dadka isticmaala calaamada cusub ee Apple
Sida aan si faahfaahsan ugu arki doonno hoosta, shirkadda falanqaynta Sirdoonka Garsoorka ayaa daabacay warbixin muujineysa in, inta lagu gudajiray wajiga iibka, isticmaalayaashu waxay doorbideen iPhone 7 Plus kan iPhone 7, labaduba waxay ku dhammaadeen madow (gaar ahaan madow madow) marka la barbar dhigo inta kale, iyo awoodda keydka keydka ee 128GB. Isbeddelkani ma sii socon doonaa hadda maadaama terminal-yada cusub si rasmi ah loo iibinayo?
1 I sii 7GB madow iPhone 128 Plus ah
1.1 Madow ayaa ugu cadcad
1.2 Iyo hadaan ka hadalno kaydinta ...
I sii 7GB madow iPhone 128 Plus ah
Sirdoonka Garsoorka ayaa la wadaagay xog cusub oo soo jeedinaysa in iPhone 7 Plus uu ka iibsaday iPhone 7-ka Mareykanka. Tani waxay noqon laheyd markii ugu horeysay ee iPhone-ka weyn cadeeyo inuu ka caansan yahay moodooyinka 4,7-inji ah.sida.
Sida munaasabadaha kale, tirooyinka la soo bandhigay ayaa ah natiijada falanqaynta xogta ay bixiyeen macaamiisha ka tirsan guddiga shirkadan cilmi baarista caanka ku ah.
Xogta waxay muujineysaa, inta lagu jiro 48-ka saac ee ugu horreysa helitaanka, 55 boqolkiiba macaamiisha ayaa iibsaday iPhone 7 Plus, marka la barbardhigo boqolkiiba 41 isticmaaleyaasha mar doortey iPhone 6s Plus, ama 35 boqolkiiba oo doortey iPhone 6 Plus. Sidaa darteed, waqti ka dib shaashadda weyn ayaa noqotay mid caan ah. Qaabka 5,5-inji ee sanadkan waa ikhtiyaar soo jiidasho leh oo aan shaki ku jirin, maxaa yeelay waxay leedahay laba kaamirohalka nooca 4,7-inji ah uu haayo hal kamarad muraayadaha indhaha ah.
55,9 boqolkiiba macaamiisha horay u sii iibsaday iPhone 7 ama iPhone 7 Plus ayaa horay u iibsaday ugu yaraan hal iPhone intii u dhaxeysay 2014 iyo maanta, sida laga soo xigtay Sirdoonka Garsoorka. 34 boqolkiiba macaamiisha ma aysan iibsan taleefan casri ah tan iyo 2014, halka iibsadayaasha haray ay ka yimaadeen Samsung, LG iyo Motorola.
Madow ayaa ugu cadcad
Dhanka kale, marka la fiiriyo maqnaanshaha Hawada Gray sannadkan, Madow wuxuu noqday midabka cusub ee ugu caansan iPhone, oo leh 46 boqolkiiba iibka kahor. Jet madow ama dhalaalaya madow sidoo kale waa ikhtiyaar aad loo jecel yahay, oo ay doorteen 23 boqolkiiba macaamiisha, in kasta oo sahayda xadidan ee dhammeystirkaan ay riixday shixnado illaa Nofeembar, sidaas darteed macaamiil badan ayaa u badan inay doortaan madow, dahab, dahab dahab ah ama qalin ah halkii.
Waxaa ku xigta caan caan ah qaabka dahabka kacay, oo markii ugu horreysay lagu soo bandhigay iPhone 6s, oo leh boqolkiiba 15. Marka xigta, dahabku wuxuu ku dhammaadaa 9 boqolkiiba iyo iPhone 7 iyo 7 Plus oo ah caddaan / qalin (tan ugu jeclahay illaa hadda), taas oo si kastaba ha ahaatee ku sii jirta boqolkiiba 8.
Iyo hadaan ka hadalno kaydinta ...
Intii lagu guda jiray seddexdii iphone ee ugu dambeeyay, in kabadan boqolkiiba 60 amarada horay loo siiyay labadii maalmood ee uguhoreeyay ayaa loogu talagalay xulashada keydinta dhexdhexaadka ah, sida laga soo xigtay Sirdoonka Garsoorka. IPhone-ka cusub ee iPhone 7 iyo iPhone 7 Plus waxay raacaan isbedelkaas. 128GB waa midka ugu caansan boqolkiiba 67waxaa ku xiga 256GB oo leh 19 boqolkiiba, iyo 32GB oo leh 14 boqolkiiba.
Sirdoonka Garsoorka ayaa la socota rasiidhada elektaroonigga ah ee ka socda 4,2 milyan ee wax ka iibsada internetka Mareykanka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » IPhone 7 Plus, midabka madow, iyo 128 GB, kuwa ugu cadcad presale
IPhone 6 iyo 6 plus laguma iibsan karo Apple Store
Mos GO: Batariya dibadeed oo lagu soo dallaco Mac-gaaga?